Hygroelectricity, waxay tamar ka qaaddaa huurka hawada. | Cusbooneysiinta Cagaaran
Nuria | | Tamarta Korontada, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Dhowr cilmi baarayaal ah ayaa bilaabay daraasadda suurtagalnimada tamar ka soo saar qoyaanka hawada, isla mar ahaantaana ay u adeegi lahayd kahortaga waxyeelada danabku keeno iyo onkodHaa, waxay noqon kartaa xaqiiqo dhab ah mustaqbalka fog, in kasta oo ay weli jirto waddo dheer oo loo maro kaamil ah nidaamkan, ganacsi aamin ah.
Fernando Galembeck, oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Campinas ee dalka Brazil, wuxuu sheeganayaa oo uu xaqiijinayaa inuu awood u yeelan doono inuu u beddelo korantada hawada lagu gudbiyo cunsur ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo hufnaan iyo bey'adeed. Tijaabo ay qaadeen cilmibaarayaashan reer Brazil waxay ahayd in la raro jawi qoyan oo silica iyo aluminium fosfaytyada ku wareegayaan, kaas oo tamar urursan waxaana loo beddelay qalab kale. Dhanka kale, xaqiiqadani waxay xaqiijisay in dhibcaha qoyaanka ee deegaanka ay ka buuxaan koronto, kana soo horjeeddo wixii markii hore la filayay.
Waxaa lagu rakibi lahaa meelo aad u qoyan, uruuriyayaasha koronto-dhaliyaha, kaas oo soo nuugi lahaa tamar isla markaana laga isticmaali karo guryaha, warshadaha, dukaamada, sagxadaha waaweyn, iwm. Sidoo kale meelaha ay ka jiraan duufaannada soo noqnoqda, kuwa tamarta ururiya ayaa lagu rakibi doonaa soo nuugo koronto y iska ilaali dheecaanka danabka, oo soo saarta dhimasho iyo khasaare maadi ah.
Fikrad horumarsan sidoo kale iska ilaali fiilooyinka korantada, oo korantada loogu gudbin karo mowjadaha, sida raadiyaha, telefishanka, taleefanka, iwm. Sifeynta tijaabadan ayaa macnaheedu noqon karaa soo saarida tamar cusub oo dib loo cusboonaysiin karo oo qadarinaysa deegaanka. deegaanka, oo ka fogow halista ay danabku abuureen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Korontada » Hygroelectricity, waxay tamar ka qaaddaa huurka hawada.
Waxyaabo waaweyn oo aan la aqoon ayaa ii soo baxa.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii nidaamkani wax yeeleynayo daruuraha?
abuuritaankeeda dabiiciga ah, ismaamulka, tayada ama adkeysiga?
Waan ognahay inay nidaamiyaan nidaamyada deegaanka iyagoo biyo ka siinaya dhammaan noocyada nolosha.
Waxyaabaha kale, waxay ka caawiyaan ka hortagga meeraha kuleylka.
Waxaan la wadaagayaa baahida degdegga ah ee loo beddelayo tamarta la cusboonaysiin karo ee aan wasakhda ahayn;
laakiin waxaan u maleynayaa inay tani dhaawaceyso daruuraha, iyadoo dhaawaceysa abuuristooda iyo tayadooda.
Qaddar yar oo daruuro ah ayaa noo keeni doona dhibaatooyin ka sii daran:
sii dardar galinta kuleylka iyo baabi’inta
bacriminta ciidda (keymaha, keymaha, dalagyada, xoolaha),
webiyada (nolosha aquifer, abaaraha), iwm. iyaga oo u rogaya dhul cidlo ah.
Waxaan rabaa inaan ka fikiro in tani aysan ahayn ganacsi kale oo daneystayaal qaarkood;
in si loo helo maalgelin iyo macaash badan ay dadka u khiyaanayso,
iyadoo doodaha ay taageereen koox saynisyahano calooshood u shaqeystayaal ah.
Waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo wax ka muhiimsan, si aan isu ogeysiiyo ugana doodo:
Waxaan dhihi karaa kaliya tamarta nadiifka ah ee qiiqa eberku uusan ku filneyn.
Haddii aan sii wadno isku duritaanka tamar badan iyo in badan, waa inay meel uun ka soo baxdaa ……
Waxaan ula jeedaa in heer kulka uu ku urursan doono tiro badan,
xirashada iyo daloolinta jawiga aan jecel nahay xitaa inbadan.
Waxaa laga yaabaa in tamarta si aan dhammaad lahayn lagu dari karo iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan
deegaanka; xitaa haddii ay tahay mid la cusboonaysiin karo oo nadiif ah?
Waxaan xasuustaa buufin loo qarxiyay qarxin ama kariyaha cadaadiska oo aan daboolnayn.
5 Sababood oo guriga loogu dhejiyo leyrarka cadceeda ku shaqeeya